लकडाउन अवधिभरको शुल्क नअसुल्न निजी विद्यालयलाई अनेरास्ववियूको चेतावनी – Sandesh Munch
लकडाउन अवधिभरको शुल्क नअसुल्न निजी विद्यालयलाई अनेरास्ववियूको चेतावनी
June 22, 2020 123
काठमाडौं, ८ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले विद्यार्थीबाट लकडाउन अवधि भरको कुनै पनि शुल्क नअसुल्न निजी विद्यालयलाई चेतावनी दिएको छ ।
अनेरास्ववियूले कोरोना भाइरसको महामारीको कारण अभिभावकहरु चौतर्फी रुपमा आक्रान्त भएका समयमा शुल्क उठाउने निजी विद्यालयहरुको घोरनिन्दा र भत्र्सना समेत गरेको छ ।
आइतबार प्याब्सन र एन प्याब्सनले अभिभावकलाई विद्यार्थीको भर्ना अभिलेख अद्यावधिक गर्न, २०७६ को बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्न र २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्न अपील गरेको थियो ।
निजी विद्यालयको उक्त निर्णयले कोरोनाले असहाय बनाएका अभिभावक र विद्यार्थीमाथि थप बोझ थपेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
उक्त बोझ कम गर्न अनेरास्ववियूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै शुल्क नलिन अपील गरेको हो ।
श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल असार ८ गते सोमबार इश्वी सन २०२० जुन २२ तारीख आषाढ शुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथी आद्रा नक्षत्र वृद्धि योग बालव करण चन्द्रमा मिथुन राशिमा आनन्दादि योगमा काल योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु भूमिरज (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) अगाडि सारेका व्यक्तीद्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनेछन । कठिनाइजनक यात्राको योग रहेको छ । आटेका कार्यमा कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ । मित्रजनसँगको अधिक निकटताको कारण भाग्योदयमा बाधा उत्पन्न हुनेछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झन्जट सहनु पर्ला ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) निरन्तर भइरहेका कार्यबाट बिषेस लाभ लिन सकिनेछ । अर्काको खुसिको लागी अनावश्यक पश्रिम खर्चीनुपर्नेछ । सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । कार्य सम्पादनमा अरुको दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) अरुको बिश्वास गर्नाले दाम्पत्य जिवनमा खटपट उत्पन्न हुनेछ । अधीक आत्मविश्वासको कारण बन्न लागेका कार्यहरु बिफल हुनेछन । मान्यजनको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखा पर्नेछ । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) टाढाको मित्रसँग अप्रत्यासित मिलन हुनेछ । सामुहिक कार्यमा खर्च हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । हतारमा गरिएको निर्णयको कारण दाम्पत्य जिवनमा खटपट उत्पन्न हुनेछ । बोल्दा बिचार पुर्याउनु होला । प्रतिश्पर्दीहरु कमजोर रहनाले तपाइलाइ कार्यक्षेत्र सहज बन्नेछ । स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य असर भोग्नु पर्ला ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) खोज तथा अनुसन्धानमुलक क्षेत्रमा बौदिकताका् खर्च हुनेछ । बाकपटुताको कारण कुरा काट्नेहरु चुप भइ प्रशंसा गर्न थाल्नेछन । पठन पाठन सफल रहनाले बौदिकताको सर्वत्र कदर हुनेछ । प्रतिस्पर्दीहरु कमजोर रहनेछन । आम्दानि क्षेत्र भने मध्यम रहेको छ । जटिल कार्यहरु सम्पादन गर्न उत्तम समय रहेकोछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) मनमा चन्चलता बढ्नाले निर्णय लिने क्षमतामा ह्राँस आउनेछन । सफल कार्यसम्पादनको लागी कडा परिश्रम गर्नु परे तापनि कार्य सफलताले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा धेरै समय र परीश्रम खर्चिनु पर्नेछ । भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) धार्र्मीक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । अप्रत्याशीत खवरले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । दुर्घटनापुर्ण यात्राको सम्भावना रहेकोछ । साथीसँग सामिप्यता बढे पनि लाभ भने ग्रहण गर्न सकिनेछैन । नयाँकार्यको थालनिका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । कार्यकुशलताले मान्यजनहरुको मन जित्न सफल रहिनेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) मान्यजनको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरले मनमा खिन्नता छाउनेछ । कार्यमा बिश्लेषणको अभावले पारिवारिक सम्बन्धमा बैमनश्यता उत्पन्न हुनेछ । अपरीचीत ब्यक्तिहरुको बिश्वास गर्नाले षड्यन्त्रमा फसीएला सजग रहनु पर्ने समय रहेको छ । भोजभतेरमा सरीक हुने अबसर प्राप्त हुनेछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) प्रतिश्पर्दि हरु कमजोर रहनेछन । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खटपट आई पर्ला । तपाईको कार्यले अन्य ब्यक्ति हरुलाई मनग्य लाभ दिलाउने छ । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ । स्वास्थमा देखा परेको गढबढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न गराउला ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) सामान्य क्षती ब्यर्होनु पर्ला । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशमा कमि आउनेछ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याको कारण मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । सामान्य आम्दानि हुने योग रहेको छ । कार्य सम्पादनमा बिभिन्न समस्याका कारण ढिलाई रहन सक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रुटिले अपजसको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
Prev“रोचक समाचार” छोरी जन्माउने आमालाई १० हजार उपहार
Next”कौसीमा दुई सय केजीसम्म तरकारी फलाउने पोखराकी सरस्वती”
सरकारी कर्मचारीले घुस माग्दा किसानले दिए भैंसी उपहार !
म संगै पोर्तुगल जाने अनि संगै बस्ने काम गर्ने इमान्दार केटो चाहियो, तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता!
मन्त्रि परिषदको निर्णय : वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (83212)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27055)
अत्यन्तै दु:खद खबर : भर्खरै कोरोनाको कारण दक्षिण अफ्रिकामा नवजात शिशुको मृ’त्यु ! RIP !!!! (13106)
भर्खरै कतारबाट आयो निक्कै ठुलो दुखको खबर, के भयो तेस्तो ? Watch Video (12350)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12012)
खुशीको खबर ! अमेरिकाले निकालेको औषधीले बिरामी चट्ट निको भएको हुदा पुरा अमेरिका खुशीको सिमा छैन हेर्नुहोस (11757)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11277)
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10106)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9684)
फेरी नेपालमा आइसोलेशनमा राखिएका २२ बर्षीय युवकको मृ-त्यु (9569)
मान्छेकोआत्माको वजन२१ ग्राम ? कसरी जानी राखौ
‘मलमासमा के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ?
कुनराशीले कुन भगवान मान्दा भाग्य उदय हुन्छ ? भिडियोहेर्नुहोस
शनिबारजन्मिएका मानिसको स्वभाब र भाग्य कस्तो हुन्छ ?
आयो खुशीको खबर! भाकल मागेमा मनोकांक्षा पूरा हुने तनहुँको छाब्दी बाराही मन्दिर